Amavaluvu wezinsimbi, okokufakwayo, ukuhlanganiswa kwesistimu ye-Fluid - CIR-LOK
Ama-Tubing nama-Flexible Hoses
Amasilinda Esampula kanye namabhodwe e-Condensate
Izikali Zokucindezela Okuguquguqukayo Indawo egeleza kanye nama-Syphons
Inkampani manje isikhule yaba yinhlangano yomhlaba wonke edizayina, ithuthukise, futhi ikhiqize izinkulungwane zemikhiqizo namasevisi wekhwalithi ephezulu. Ithimba lezobuchwepheshe liqoqe ingcebo yesipiliyoni ezimbonini ezifana nokuphehla ugesi, i-petrochemical, igesi yemvelo kanye ne-semiconductor Industry.
Yonke imikhiqizo ye-CIR-LOK ingaphansi kwezinqubo eziqinile zokulawulwa kokuqinisekiswa kwekhwalithi kuzo zonke izigaba zokucubungula ama-oda, ukuklama, ukukhiqiza, ukuhlola kanye nezitifiketi ukuze kuqinisekiswe ukuthi lezi zidingo ezibalulekile zamakhasimende ziyahlangatshezwa.
Kwa-CIR-LOK, silwela ukwaneliseka okuphelele kwamakhasimende ethu. Imibuzo yakho izophendulwa engakapheli amahora angama-24. Ithimba lethu linezisebenzi ezinolwazi lokuphendula imibuzo yakho ngokushesha. Ukulethwa okusheshayo kuyisihluthulelo sempumelelo yakho.
Umgomo oshubile we-CIR-LOK uwukuziveza njengomholi wemboni futhi sandise isabelo sethu semakethe. Lokhu kugcinwa kuyo yonke iminyango ngaphakathi kwenhlangano. Umzamo wethu wonke uzovikela ekulahlekelweni ukuthinta komuntu siqu okwenza ibhizinisi lethu lijabulise futhi liphumelele kubo bonke abahililekile.
Amavalvu Wokusiza Alinganiselayo
Ukufakwa kwe-Twin ferrule Tube
I-Instrumentation Pipe Fittings
Instrumentation Weld Ukufakwa
I-Metal Gasket Face Seal Fittings
I-Miniature Butt-Weld Fittings
Amavalvu Okucindezela Okuphansi, Okokufaka kanye namashubhu
Amavalvu Okucindezela Okuphezulu Okuphezulu, Ukufakwa kanye Neshubhu
Amavalvu Okucindezela Okumaphakathi, Okokufakwayo kanye namashubhu
Izilawuli Zokucindezela Emuva
Izilawuli Zokunciphisa Ingcindezi
I-Dual Stage Pressure Regulator